Musiibooyinkii dabiiciga ee ugu darnaa ee 2016 | Saadaasha Shabakadda
Sannadka 2016 wuxuu ahaa sanad ay masiibooyinka dabiiciga ka mid ahaayeen halyeeyadii ugu waaweynaa. Duufaanta Matthew, dhulgariirkii ka dhacay Talyaaniga, dabkii ka kacay California ... Dhamaantood waxay galaafteen nolosha kumanaan dad ah waxayna geysteen waxyeelo maadiga ah oo aad u weyn. dhammaan meelaha ay dhibaatadu saameysey.
Hadda oo sannadku dhammaanayo, bal aan dib u eegno maxay ahaayeen musiibooyinkii dabiiciga ahaa ee ugu xumaa ee dhacay sanadkii 2016.
1 Dhulgariir ka dhacay Taiwan
2 Daadad ka dhacay Pakistan
3 Dabka ka holca California
4 Dhulgariirkii Talyaaniga
5 Duufaanta Matthew
Dhulgariir ka dhacay Taiwan
Sanadkii si xun ayuu ku bilaabmay Taiwan. Halkaas, bishii Febraayo, dhulgariir cabirkiisu yahay 6,4 on the Richter scale sababay dhimashada 26 qof, iyo in kabadan 258 waxay ahayd in lasoo badbaadiyo.
Daadad ka dhacay Pakistan
Bishii Abriil roobab culus oo daadad badan ayaa sababay dhibaatooyin badan Pakistan, waddan ay daadadku yihiin masiibo guud. Sanadkaan, 92 qof ayaa dhimatay, 23 ka mid ah iyada oo ay sabab u tahay dhul go '. Dhibanayaasha badankood waxaa laga diiwaangeliyey gobolka Khyber Pakhtunkhwa.
Dabka ka holca California
Sawir - AP
Kalifoorniya dabka waa dhacdooyin soo noqnoqda, laakiin sanadkan si gaar ah ayuu halis u ahaa. Bishii Juun dab wuxuu ku fiday in ka badan 100 hektar wadada Erksine Creek, in ka badan XNUMX guri ayaa burburay. Bil kadib, bishii Ogast, waxaa jiray dab kale oo daatay in kabadan 14.550 hektar, kuna qasbay daad gureynta in ka badan 82 kun oo qof.
Bishii Agoosto xoog leh dhulgariir cabirkiisa lagu qiyaasay 6,2 ayaa ka dhacay bartamaha Talyaaniga, oo u dhow magaalada Accumoli. Sababay ugu yaraan 247 dhimasho, waxaana ku dhaawacmay ilaa 400.
Haiti ka dib marinka Matthew. Sawir - Reuters
El Duufaanta Matthew waxay ahayd tii ugu khasaaraha badnayd xilligii duufaantii Atlantic sanadkan. Waxay gaartay qeybta 5, oo leh dabaylo gaaraya 260km / saacaddii, iyo sababay dhimashada 1655 qof, 1600 kaliya Haiti.
Masiibooyinka dabiiciga ah marwalba way dhacayaan. Waxaad la qabsan kartaa oo kaliya sida ugu fiican ee aad kari karto.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Dhacdooyinka saadaasha hawada » Musiibooyinkii dabiiciga ahaa ee ugu xumaa ee dhaca sanadkaan 2016
Donald Trump wuxuu sii wadaa inuu ka fekero inuu ka baxo heshiiskii Paris iyo in kale
30% in yar oo ka mid ah shimbiraha tahriibka ayaa yimaada Spain sababo la xiriira isbedelka cimilada